Jobho 12 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Jobho anopindura (1-25)
“Handina kuderera kukupfuurai” (3)
“Ndava chiseko” (4)
‘Mwari ndiye ane uchenjeri’ (13)
Mwari ari pamusoro pevatongi nemadzimambo (17, 18)
12 Jobho akabva apindura achiti: 2 “Chokwadi imi ndimi vanhu vanoziva,*Uye uchenjeri huchafa pamwe chete nemi! 3 Asi iniwo ndinonzwisisa.* Handina kuderera kukupfuurai. Ndiani asingazivi zvinhu izvi? 4 Ndava chiseko cheshamwari dzangu,+Munhu anoshevedzera kuna Mwari kuti apindurwe.+ Munhu akarurama, asina chaanopomerwa, ndiye ava chiseko. 5 Vaya vakagarika vanozvidza kutambura,Vachifunga kuti ndekwevaya vane tsoka dzisina kugadzikana.* 6 Matende emakororo ane runyararo,+Uye vaya vanotsamwisa Mwari vakachengeteka,+Vaya vakabata mwari wavo mumaoko. 7 Asi bvunzai mhuka, uye dzichakurayiridzai;Neshiri dzedenga, uye dzichakuudzai. 8 Kana kuti fungai nezvenyika,* uye ichakurayiridzai;Uye hove dzemugungwa dzichakuzivisai nezvazvo. 9 Pazvinhu zvese izvi ndechipi chisingaziviKuti ruoko rwaJehovha ndirwo rwakaita izvi? 10 Muruoko rwake ndimo mune upenyu hwechinhu chese chinorarama*Uye simba reupenyu remunhu wese.*+ 11 Nzeve haiedzi mashokoSekuravira kunoita rurimi zvekudya here?+ 12 Uchenjeri hausi pakati pevakwegura here,+Uye kunzwisisa hakuuyi nekupindana kwemazuva here? 13 Iye ane uchenjeri nesimba;+Anopa mazano uye anonzwisisa.+ 14 Kana akaputsa chinhu hapana anogona kuchivakazve;+Chaanenge avhara, hapana munhu anogona kuchivhura. 15 Kana akachengeta mvura, zvinhu zvese zvinooma;+Kana akaituma, inozadza nyika.+ 16 Iye ane simba neuchenjeri;+Munhu anotsauka, nemunhu anotsausa, ndevake vese; 17 Iye anoita kuti makurukota afambe asina shangu,*Uye anoita kuti vatongi vave mapenzi.+ 18 Anosunungura zvisungo zvinoiswa nemadzimambo,+Uye anosunga bhandi muchiuno mavo. 19 Anoita kuti vapristi vafambe vasina shangu,+Uye anowisira pasi vaya vane masimba, vakanyatsodzika midzi;+ 20 Anoita kuti makurukota anovimbwa nawo atadze kutauraUye anobvisa kuchenjera kwevakwegura;* 21 Anodurura kuzvidzwa pavakuru vakuru,+Uye anoita kuti vane simba vapere simba;* 22 Anobudisa pachena zvinhu zvakadzama zviri murima,+Uye anobudisa chiedza pane rima gobvu; 23 Anoita kuti marudzi akure, kuti azoaparadza;Anoita kuti marudzi akure, kuti azoaendesa kuutapwa. 24 Anobvisa kunzwisisa kwevatungamiriri* vevanhuUye anoita kuti vadzungaire nemasango.+ 25 Vanotsvangadzira murima,+ musina chiedza;Anoita kuti vadzedzereke sevarume vakadhakwa.+
^ ChiHeb., “ndimi vanhu vacho.”
^ ChiHeb., “ndine mwoyo.”
^ Kana kuti “tsoka dzinotsvedza.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “taurai nenyika.”
^ Kana kuti “mune mweya wemunhu wese mupenyu.”
^ ChiHeb., “renyama yemunhu wese.”
^ Kana kuti “atorerwe zvese.”
^ Kana kuti “kwevakuru.”
^ ChiHeb., “anosunungura bhandi revane simba.”
^ ChiHeb., “Anobvisa mwoyo yevatungamiriri.”